काठमाडौं, २०७१ चैत्र ३० – हरेक बर्षलाई भित्तामा झुण्डिएको क्यालेन्डरलाई फेर्दै गर्दा हामी व्यक्तिगत, समाज, देश अनि विश्वको समिक्षा गर्छौ । कहिलेकाहीँ क्यालेण्डरसँगै मानिसको जीवन पनि फेरिन्छ । तर, विगत केही बर्षदेखिको आँकडा हेर्ने हो भने नेपाली फिल्मका लागि क्यालेन्डर फेरिनु बाहेक अरु केही पनि देखिएको छैन । बर्षभरिको क्यालेन्डर पल्ट्याउदै हेर्ने हो भने नेपाली फिल्म क्षेत्रले केही पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । आखिर, किन त ? साँच्चै हामी चुकेका नै हौ त ?
नयाँ बर्ष लागेसँगै आशाका किरणहरु छरपष्ट हुन्छन् । नयाँ बर्षसँगै नयाँ आशा बोकेर कैयौ फिल्मको घोषणा गरिन्छ, शुभकामना थापिन्छ । तर, त्यही बर्ष त्यो फिल्म प्रदर्शनमा आएको अत्तोपत्तो नै हुँदैन ।
साच्चै हामी कहाँ चुक्यौ ?बलिउड फोबियाले गाजेको नेपाली फिल्म बजारमा हामी सधै नै एउटा न एउटा बहाना बनाएर दोष अरु माथि थोपर्छौ । फिल्म नराम्रो बने निर्देशकको गल्ती, राम्रो बने सबै मैले गर्दा भएको हो भन्ने प्रथा हामीले बोकेका छौ ।
यो बर्ष आँकडाका हिसाबले करिब ८३ वटा फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन् । बलिउड फिल्मलाई हेर्ने हो भने त यो संख्या १३० को हारहारीमा पुग्छ । अझ, यसैबर्षदेखि त बलिउडसँगै दक्षिण भारतीय फिल्मको व्यापार पनि नेपालमा सुरु भैसकेको छ । ८३ वटा फिल्म चल्दा हामीले हातमा सेकेण्डमै गन्न सक्ने उपलब्धि पाएका छौ ।
यसैले पाएका कम छौ, गुमाएका धेरै छौ । नेपाली फिल्म यसरी हरेक बर्ष चुक्नुको पछाडि गल्ती एकको मात्र छैन । नेपाली फिल्मसँग जोडिएर आफ्नो दैनिकी चलाउँदै आएका सबैजसो यो सूचिमा अटेका छन् । फिल्म चल्दा म हिट नचल्दा निर्देशक र निर्माताले गर्दा भनेर पन्छिने बाटो कलाकारले छोड्न जरुरी छ ।